Hargeysa: Maxkamad xukuntay labo weriye – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hargeysa – Mareeg.com: Maxkamadda magaalada Hargeysa ayaa xukunno isugu jira xabsi iyo ganaax maanta ku xukuntay weriye Yuusuf Cabdi Gaboobe oo ah mulkiilaha wargeyska Haatuf oo fadhigiisu yahay magaaladaas iyo tififtiraha wargeyskaas, Axmed Cabdi Cige.
Maxkamadda ayaa Yuusuf Cabdi Gaboobe ku xukuntay 3 sannadood xarig ah iyo $9,000 oo ganaax ah, waxayna 4 sannadood oo xarig ah ku xukuntay tifaftiraha wargeyska, Axmed Cabdi Cige oo ka maqnaa maxkamadda.
Sidoo kale maxkamaddu waxay ruqsaddii shaqo ka qaadday wargeyska Haatuf oo ay sheegtay in uusan ka shaqeyn karin Somaliland.
Ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda Hargeysa Aadan Salaad Seed ayaa warbaahinta oo dibad joog ka aheyd xukunka wuxuu u sheegay in wariyeyaasha la xukumay lagu helay been abuur ay ka qoreen maamulka iyo shakhsiyaad ku dhow-dhow, loona cuskaday xukunkooda xeerka ciqaabta guud ee Somaliland.
Qareenka difaacayey wariyeyaasha ayaa sheegay in xukunku yahay mid sharci darro ah, kuna xadgudbay xuquuqda suxufiga iyo saxaafadda ee ku xusan qaanuunka u degsan maamulka Somaliland.
Xukunka Suxufiyiintan ayaa lagu waday in shalay lagu dhawaaqo balse dib ayaa loo dhigay, iyadoo maanta aan saxaafada lagu casumin maxkamada xiligii xukunka la ridayey.
Wargeyska Haatuf oo kamid ah Jaraa’idka kasoo baxa Somaliland ayaa kamid ahaa saxaafadii si weyn u dhaliilay siyaasada xukuumada xilka heysa isla markaana warbixino ka qoray xubno awood badan kuleh dowlada Somaliland.
Dowlada Somaliland ayaa lagu eedeeyey in ay maxkamada u adeegsaneyso caburinta saxaafada xorta ah.
Booliska Somaliland ayaa 7-dii April ee sannadkan la wareegay xarunta wargeyska Haatuf, xabsigana u taxaabay mas’uuliyiinta la xukumay maanta.